Unyaka omusha Nokho ngezinye izikhathi kanye kuphela ngonyaka, kodwa thina njalo phambili leli holide futhi kahle nokukulungiselela. Babathanda kakhulu izingane zakhe sikakhusimusi amahle nezipho. Futhi-ke, zonke izingane ufuna ukubona ngamehlo abo Santa Claus ngobusuku bangaphambi leli holidi, futhi ukusuka kwamenza wanconywa futhi izipho.
Yiqiniso, wonke umzali izama ukuhlela acacile kakhulu futhi ongasoze uNcibijane izingane zabo. Ngokuvamile lokhu ukusiza amafemu ahlukahlukene okungase ngaphambilini endlini Santa Claus. Kakade uhlelo ukulungele yokuxhumana nengane futhi ngokuvamile zokubhukuda kukhona iqiniso. Esikhathini sethu, umfanekiso Santa Claus kakhulu ehlaselwe ithonya European futhi indiza olungenamkhawulo lamaphupho Abaklami zethu. Namuhla ungabona suit frost nemibala eziluhlaza kanye green kanye nezinye of the rainbow.
Kukhona kombuzo, "indlela yokwenza wangempela Santa Claus imvunulo?".
imvunulo frost laso eliyingqayizivele othwala kuphela ngosuku olwandulela unyaka omusha, nezingane zakhe bazokubona wizadi grandfatherly.
Suit Santa Claus has a lot of izici, ingubo ngayinye kunencazelo ejulile.
Okokuqala - ijazi noboya, kumelwe nakanjani babe bomvu ngamaphetheni ingcaca, umsebenzi womfekethisi ngentambo esiliva. Noboya coat lingafika uzwane futhi akhuphukele e-maphakathi no-ithole. Izinkinobho akufanele ame ezingakanani noma ezime kanjani. Uma elingenamikhono sifushane nge buttons ezinkulu esiliva, lokhu suit Santa, hhayi Santa Claus. Futhi, suit frost kufanele ibe izakhi, ehlotshiswe noboya emhlophe.
Ubaba Coat Christmas ebophe ibhande ezimhlophe, siphethe intambo umbala obomvu, ukuthi endulo kwakufanekisela nezokuxhumana ezihlobene-zofuzo. Namuhla, liye walahlekelwa incazelo yalo nokulisebenzisa kwenzelwe nje sokusebenza.
imvunulo yakhe uhlale cap frost sigcwalisa obomvu, ngokucebile umsebenzi womfekethisi isiliva lihlotshiswe amapharele. Cap kumele isiyingi isesimweni, ngakho sathathwa ezikhathini tsarist omelela kwezomnotho namandla. Futhi Santa Claus, ngemcondvo, has namandla amakhulu phezu nemvelo. Futhi noma kunjalo, musa ukugqoka ezicijile isigqoko nge bubo, akuyona into uthola phezu Santa Claus.
Bambalwa abantu abacabanga ukuthi ubeka Santa Claus ngaphansi ijazi lakhe. Futhi ngingabeka ukugqoka ukukhanya izingubo, okungukuthi, ibhulukwe elimhlophe nomhlophe nelineni ihembe njengoba iwuphawu zonke ukukhanya futhi zihlanzekile! Ngeshwa, esikhathini sethu, ngokuvamile egqoke ibhulukwe obomvu, futhi ngokuyisisekelo okungalungile futhi, futhi, okusekelwe Santa. Ubaba Shirt Christmas kungenziwa womfekethisi ongokomfanekiso izibalo weJiyomethri, noma umane ube mhlophe.
Ukuze wenze ngendlela njengoba ingase ibe yiqiniso, uqeda imvunulo frost amabhuzu emhlophe. Ngemva Claus uhlala enyakatho ezindaweni ezibandayo. Siyakwamukela, uma amabhuzu womfekethisi esiliva. Uma lungekho khona, khona-ke isithombe Santa Claus kungenziwa kulekelelwa amabhuzu abomvu noma amhlophe, kodwa noma kunjalo, ngeke kube mnyama!
Ungakhohlwa ukuthi Santa Claus unezisebenzi ezingu Crystal, ekupheleni le isihloko sodondolo ngesimo ngenyanga. Abasebenzi bekulokhu iwuphawu lwamandla wakhonza njengomdala umlamuli ezenzweni ezinhle. Uma ungazange wathenga abasebenzi ezenziwe rock crystal izinyembezi ecacile, izisebenzi kulungile, zihambisana ne ucwecwe nesiliva, ithiphu lwenyanga kulula ukuyeka amakhadibhodi bopha ne ucwecwe.
Indlela yakho okuhle Umkhulu Frost isicishe ilungele. Nokho, kumelwe ekhumbula omunye umniningwane obalulekile kakhulu, ngaphandle okuyinto Santa Claus akuyona langempela. Yiqiniso, i-eside grey nesilevu amadevu, okuyinto ifanekisele amandla, ingcebo engokomoya nokuhlakanipha izinhlamvu abathandekayo kunazo zonke izingane.
Manje zonke izinto yezembatho endaweni, futhi umkhulu wazo ngokufanelekile ye Frost Ingabizwa kufanele ngokuthi okwamanje.
Indlela yokwakha unodoli gothic ngezandla zakhe?